Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Xaafada Suuqa Xoolaha Lagu Weeraray. – Calamada.com
Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Xaafada Suuqa Xoolaha Lagu Weeraray.
Saacadihii lasoo dhafaay ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey weerar qorsheysan ku qaadeen isbaarada maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka ay dhigteen biyo dega xaafada Suuqa Xoolaha ee degmada Hilwaa.
Dagaalka oo muddo kooban socday ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan’iyadoona dhawaaqa rsaasta dagaalka laga maqlayay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho.
Dagaalka oo dhacay xilli habeen ah waxaa adag in la helo xogta rasmiga ah ee ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalka’iyadoona goobta xalay ciidamada Mujaahidiinta ay weerareen ay tahay goob isbaara ah oo maleeshiyaatka dowlada Ridada dadka iyo gaadiidka si aad ah ugu dhibaateeyaan.
Dagaalkan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay qarax culus oo ka dhacay xaafada Cali Kamiin ee degmada Wardhiigley lagu dhaawacay saraakiil sar sare oo ka tirsanaay qeybta miino baarista maleeshiyaatka nabadsugida dowlada ridada.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 16-07-1437 Hijri.
Next: Sarkaal Itoobiyaan Ah Oo Askari Ku Dilay Gobalka Hiiraan.